Kuuya kweECG basa reApple Watch Series 4 mumaoko eApple | Ndinobva mac
Svondo rapfuura Apple yakamutsa iyo ECG inoshanda paApple Watch inoenderana, ndiko kuti, neApple Watch 4 Series. Uku kumisikidza kwakaitika pamwe nehurongwa hwekushandisa, asi parizvino vanogona kungonakidzwa muUS Mubvunzo unomuka, nekuti sezvo Hardware yakafanana kune wese munhu, nei ichingonakidzwa muUS chete?
Mhinduro iri mune mutemo uripo munyika yega yega zvine chekuita nekushandiswa kwema electrocardiograms, nevashandi vasina kurovedzwa kwehutano, ndiko kuti, nevazhinji vashandisi.
Nyaya ichangoburwa inowanikwa muCanada. Mumwe mugari wenyika iyoyo abvunza veCanada nezvehutano kuburikidza neTwitter kana nzira yekubvumidza yatanga iyo inobvumidza ECG mashandiro muChikamu 4. Sangano rehutano rakazvipindura izvozvi Hauna kugashira chero chikumbiro cheiyo Apple Watch Series 4 chishandiso.
Pakuziva kwemutongi, ndiye mugadziri anofanirwa kutaura navo, kuti homologate mushonga wekurapa, sechishandiso chekutarisa ECG. Rudzi urwu rwechigadzirwa haruna kujairika kune musina ruzivo, uye nekudaro, hurumende yega yega inofanirwa kudzidza kuti mudziyo unobvumidzwa sei, unowanzoitirwa vashandi vehutano.
Hatizive hurongwa hwenyika dzeEuropean maererano neECG mvumo yeApple Watch Series 4. Chero zvazviri, kuti unakirwe nebasa iri, unofanirwa watchOS 5.1.2 kana gare gare, iyo Apple yakaburitsa China rapfuura. Kana iwe usati waziva kuti basa iri rinoshanda sei, chete isa munwe wako kwemasekondi makumi matatu mukorona uye nekumisikidza iro basa mukushandisa kweECG yeApple Watch, wachi ichataridza kana tiine chero rudzi rwe arrhythmia kana fibrillation, ichitinyevera nezvechirwere chinogona kuitika chinogona kudzivirirwa nekusimbiswa kweichi anomaly mune yehutano nzvimbo. .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Kuuya kweECG basa reApple Watch Series 4 mumaoko eApple
Uye kuSpain kwenguva rini ???? Anoseka…
Apple Pay yave kuwanikwa kuGerman nerutsigiro rwemabhangi gumi nemashanu
Vhiki rino rinoratidzika seyakajeka rekuuya kweApple Pay kuGerman